♪ Angel Shaper: ကဗျာမဆန်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ နိစ္စဓူဝ တပိုင်းတစလေးများ
သူငယ်ချင်းတွေကို စိတ်ချမ်းသာမှုပေးတဲ့ နိစ္စဓူဝလေးတွေနဲ့အတူ တန်ပြန် စိတ်ချမ်းသာမှုတွေ ရရှိပါစေ
နိစ္စဓူဝ ကြားမှာ လုံးရင်းလည် လုံးချာလည်နေတဲ့ မိအိမ်ကျယ် တစ်ယောက် ကောင်းမွန်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်
စိတ်ထားမှန်တဲ့ လူတွေနှင့် ကြုံပါရစေဗျာ။ ဒူဘိုင်းမှာ သရဲတွေ အများကြီးနော် (သတိထား ဟဟ)
25 September 2009 at 19:09
တနေ့ တနေ့ဒီလိုပဲ ဒီလိုပဲ ...
ပျော်အောင်သာနေပေတော့ ကွယ် ..
ပျော်ရာ မနေရ တော်ရာမှာ နေရပေမဲ့. တော်ရာနေရာမှာ ပျော်အောင် နေရတော့မှာပဲ ပေါ့..
စာဖတ်ကြည့်ရင် သိပါတယ်.. ပေါ့ပါးသွက်လက် ပျော်ရွှင်တတ်တယ် ဆိုတာ.. ဟာသဉာဏ်လေးကလည်း သဘောကျစရာ..
ဒို့တွေကလည်း ပျော်တတ်တော့ ပေါင်းလို့ရပြီ..
စာတွေလာဖတ်သွားတယ်နော်....ခင်ဖို့ ကောင်းလို့ ခင်သွားပီ
အိမ်မှာတော့ နွဲ့ဆိုးဆိုးပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကလေးလေးပေါ့။
အလုပ်ရောက်တော့ ဖော်ဖော်ရွေရွေနဲ့ အနုနည်းတွေ အကြမ်းနည်းတွေသုံးပြီး လောက ပညာတွေ တတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ အစ်မလေးပေါ့။ လိုက်လျောညီထွေ နေထိုင်တတ်လို့ ချီးကျူးပါတယ်။ အစ်မ ကလေးလေးရေ။
25 September 2009 at 19:50
အစ်မလည်း ဒီရက်ပိုင်း Enrique Iglesias ရဲ့ Somebody's Me ကို နားထောင်နေတာ။ညီမလေးရဲ့ နိစ္စဓူဝထဲက တော်တော်များများနဲ့လည်း တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။ =)
အိပ်ရာထတာနဲ့ ကျမ်းစာဖတ် ဆုတောင်းတာလေးကို သဘောကျတယ်... ညီမလေး ဘဝတလျှောက်လုံး ဘုရားသခင်ထံမှ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများ ကြွယ်ဝစွာ ခံစားရပါစေ....
နေ့ တဓူ ၀ အကြောင်းလေးလာဖတ်သွားတယ်
ဖတ်ကြောင်ပါ အလုပ်မအားသဖြင့်ဘယ်မှမသွားအားကြောင်းပါ ( လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုခ)
customer service အလုပ်က တစ်ခါတစ်လေလည်း ပျော်စရာကောင်းတယ် တစ်ခါတစ်လေလည်း ရစ်တဲ့လူနဲ့တွေ့ရင်တော်တော်လေး စိတ်ညစ်ရတယ်နော်... စိတ်ဆတ်ရင်တော့ မလွယ်ဘူး...
အစစအရာရာ အဆင်ပြေပါစေ အိန်ဂျယ်ရေ...
စလုံးမှာ အခြေအနေမကောင်းရင် ဒဒွေးပြေးခဲ့မယ်လေ... ရတယ်မလား ဟက် ဟက်..
သူငယ်ချင်းတွေရယ် အွန်လိုင်းပေါ်က မောင်နှမတွေကို သံယောဇဉ် တော်တော်ကြီးတယ်နော်...အားလုံးကို ပျော်ရွှင်မှုတွေ ပေးနေတဲ့ နိစ္စဓူဝလေးတွေကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ...
ကလေးအမေက သူ့ ကလေး လက်နာသွားလို့တဲ့ ... မန်နေဂျာကို သွားတိုင်တယ် ဗလအား ကိုးနဲ့လူမိုက်မလုပ်ပါနဲ့ .... :P
26 September 2009 at 01:02
ဖတ်ရတာ အရမ်းကိုကောင်းသလို လက်တွေ့ဘ၀တွေက ၀တ္တုပြဇာတ်တစ်ပုဒ်လိုပါပဲလား....
အပြုံးလေးတွေနဲ့ ၀န်ဆောင်မှုပေးသလို ဗလအားကိုးနဲ့ဆိုတော့ ဟဲဟဲ... နည်းနည်းတော့ ရှိန်တာပေါ့... :) :) :)
ဆန္ဒနဲ့ ဘ၀ တထပ်တည်းမကျသေးသ၍တော့
တို့တွေရဲ့ ဘ၀ ဘယ်လိုဆုံးမှန်းမည်နည်း ချင်းတောင်းလေးရေ....
အားမာန်နဲ့ ဖြစ်လေရာဘ၀မှာ ကြေကွဲရင်တောင်
ကြံ့ခိုင်စွာနဲ့ ကြေကွဲရတဲ့ ဘ၀တွေပါ...
အနာဂတ် နေ့သစ်တွေ လှပပါစေလို့
26 September 2009 at 01:50
ဟိဟိ ဖတ်ရတာ ရီရတယ် ဟဲဟဲ
ဖတ်သွားတယ်နော် သမီးကြီးရေ ဘိုင် တာ့တာ
26 September 2009 at 02:16
26 September 2009 at 03:36
ကဗျာမဆန်တဲ. နိစ္စဒူဝ မို.ဘဲတော်တော.တယ်
မကြယ်ဆီ ပညာသင်ရလောက်တယ် ကိုယ်.ကိုလည်း
သနားအောင်ရေးတတ်ပ လူလည်လေး ဘဲဗျ :D :P
26 September 2009 at 03:43
26 September 2009 at 06:30
နိစ္စဓူဝ.. လေးတွေ ကိုလာရောက်ခံစားသွားတယ်..
26 September 2009 at 06:32
ပျော်ရွှင်ပါစေ.. မဖြူစင်ကြယ်ရေ... နိစ္စဓူဝ.. လေးတွေ ကနေ ပျော်ရွှင်စ၊ရာနေ့လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ..
ကော်ဖီတွေသောက်လှချီလား။ သိပ်မသောက်နဲ့ ။ ခေါင်းကိုက်နေတယ်မဟုတ်လား
ဒီမယ် ကလေးမ မန်နေဂျာ မဟုတ်ဘူး သူဌေးနဲ့ကို တိုင်ရမယ် ကျမ ကလေးလက်ကို ညှစ်သွားလို့ ဟွန်း
ဖြူစင်ရေ ဗလအားကိုးနဲ့ အနိုင်ကျင့်တယ်ပေါ့လေ ဟုတ်လား ဟိဟိ
သယ်ရင်းလေးရဲ့ နိစ္စဓူဝလေးကို ဖတ်သွားတယ်
ပုခုံးကြီးကို အမှီခံတဲ့ Rain ဆိုတဲ့သူက တော်တော် မြာပွေပုံပေါက်တယ်...
အိန်ဂျယ်ရဲ့ နိစ္စဒူဝလေး စိတ်ချမ်းသာမှု့ ရှိတယ်ဟ။ အလုပ်မှာတော့ အဆင်ပြေနေပါစေနော့ :) အမြဲပြုံးနေတတ်တဲ့ ကောင်မလေး ပိုပိုပြီး နိစ္စဒူဝကြား ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေ :)
26 September 2009 at 15:09
နိစ္စဒူဝတိုင်းကြားမှာ အဆင်ပြေ ပျော်ပါစေ သူငယ်ချင်း
နိစ္စဒူဝတွေနဲ့မို့မရောက်တာအတော်ကြာသွားတယ်။ ရန်ကုန်ကိုရောပြန်ဖြစ်လား။ဘယ်လိုလဲ အခြေအနေ။လိပ်စာပေးထားတယ်။ လာလည်ဦးနော်။
1 October 2009 at 23:40
linkink parkရဲ့new divideသီချင်းတော့ကြိုက်တယ်